Ny sasany manitsoka ny antsipirian'ny fitaovan'ny Huawei Mate 9 | Vaovao momba ny gadget
Huawei dia manohy miasa hatrany amin'ny fanavaozana ny tontolon'ny telefaona, raha ny marina dia izy no lasa mpivarotra fitaovana voalohany tany Sina, nihoatra ny Xiaomi, zavatra tsy azontsika eritreretina. Ity laza ity dia azon'i Huawei, manolotra fitaovana maharitra, manamboatra fitaovana matanjaka sy manaitra amin'ny vidiny mirary tokoa. Ny maodely farany ambony hatolotr'i Huawei antsika dia ny Mate 9, fitaovana iray izay hampiditra ireo fanavaozana teknolojia rehetra azontsika eritreretina amin'ny 2016, ary ny toetrany dia tafaporitsaka androany maraina tao amin'ny tranokala sinoa. Te hahafantatra ny fepetra rehetra momba ny Huawei Mate 9 ve ianao? Aza adino izany.
Amin'izany fomba izany dia hamaky ny mofomamy hatrany am-boalohany isika, ary izany dia ny maodely ambony amin'ny Huawei Mate 9 dia hanome antsika kely noho ny RAM 6GB ary fitehirizana anatiny 256GB, eny, ny loko mety ho olana, satria izy irery no iray amin'ireo modely azo vidiana amin'ny mainty. Anisan'ireo loko hafa hatolotr'i Huawei ho an'ny Mate 9 dia ho hitantsika ny fotsy, volamena, volontsôkôlà, volondavenona ary mavokely. Fa ny mahaliana anao dia ny vidiny, aza manantena ny vidiny ambany, satria tsy, manodidina ny € 630 eo ho eo, izany fiantohana izany dia mendrika azy ireo, na dia mety ao anatin'izany aza ny vidin'ny sarany dia aleon'ny olona mandoa marika amin'ny Samsung sy Apple.
Ny efijery dia ho 6 santimetatra ary tsy fantatsika ny vahaolana, na dia tsy manantena na inona na inona eto ambany QHD aza izahay. Raha ny momba ny processeur, a Kirin 960 niaraka tamin'ny Android 7.0 hatramin'ny nanombohany. Ho an'ny fakantsary any aoriana dia ho hitantsika ny modely roa efa mahazatra miaraka amin'ny sensor 12MP sy ny fahaiza-manao fandraisam-peo 4K. Ny fakan-tsary eo aloha dia ho ampy ho an'ny selfie am-perinasa miaraka amin'ny 8MP Ankoatr'izay, ny maodely rehetra ambonin'ny 64GB dia hanana rafitra SIM roa.
Na izany aza, hisy ny kinova mora vidy kokoa, Tsaroanay fa ny kinova izay manana fitehirizana 400GB miaraka amin'ny RAM 64GB dia manodidina ny 4 €, vidiny mampientanentana izay hahatonga azy io ho mpivarotra tsara indrindra any Espana raha vantany vao milatsaka 350 € eo ambaniny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny sasany manitsoka ny antsipirian'ny fitaovan'ny Huawei Mate 9